Shiinaha tuubooyin xumbo silikoon ah oo heerkulkiisu sarreeyo oo loogu talagalay soosaarka iyo warshad hoggaamineed | Jujie
Fiberglass tuubada tidcan
Xumbo caag silikoon ah
Waxyaabaha silikoonku ku duuban yahay
Silikoonku wuxuu kala gooyay giraanta wax lagu xidho
Cajalad silsilad dhejis ah oo silikoon ah
Cajalad silikoon ah oo isku-dhejisan
heerkulka sare tuubooyinka xumbo silicone cawl for hogaanka
casaan, buluug, cadaan, madow, jaalle, ECT
xargaha silikoon xumbo ah
cabir caadi ah / aan caadi ahayn
albaabada iyo Windows, mashiinada, ECT
Dhexroor ka baxsan:
Sharaxaadda alaabada ee xargaha silikoon xumbo ah
Markaad ubaahantahay waxsoosaar sareeya waxsoosaarka bacaha silikoonada, aamina tayada iyo xirfad-wanaaga aan kusoo bandhigno halkan alibaba. Waari kara oo laastik ah. Waxay haysaa heerkul aad u sarreeya oo hooseeya. Ma sameeyo koronto. Halkan Jujie, waxaan uxusnay geeddi-socodka waxsoosaarka si kaamil ah si aan u soo bandhigno wax soo saar tayo leh oo aan hubno inaad ku qanacsan tahay. Waxaan la kulannaa ISO 9001: heerarka 2015. Waxaan bixinaa ikhtiyaarrada wax iibsiga ee joogtada ah iyo sidoo kale xulashooyinka wax iibsiga jumlada.
tubbo xumbo silsilad caag ah
Heerkulka heerkulka: -40 ℃ - 200 ℃
Waxaa si gaar ah loo farsameeyay, ma laha sun, kuleyliyaha wanaagsan, iska caabinta gabowga, waxay qaadi kartaa 200 temperature heerkulka sare iyo danab sare.
Waa dusha sare, jilicsan oo jilicsan.
Ku habboon golaha wasiirada, baabuurta, weelka, ku buufinta, qaboojiyaha, qurxinta, albaabada iyo Windows, mashiinada. Qalab tayo sare leh ayaa laga baaraandegi karaa tuubooyinka oo loo soo saari karaa si waafaqsan heerka.
Cufnaanta ku saabsan 0.8, soo noqoshada degdegga ah, kuleylka kuleylka hooseeya.
Waad ku daabacan kartaa astaantaada calaamado, iyo shuruudo kale.
Ma ku siin karaa muunad noqon doonta sida aad u baahan tahay, sida cabirka, dhumucda, midabka, iyo adkaanta.
Faa'iidooyinka wax soo saarka: 1.Heerka heerkulka sare,Heerkulka u adkaysta.
3. Si fiican u shaabad u dhig.
4.Technology-ga waa mid qaan gaar ah, oo xasiloon.
5. Waxaa loo habeyn karaa qaybo aan caadi ahayn.
6. Cabbirka saxda ah
Xumbo silikoon xumbo strip seal (mm) Xumbo tuubbo caag ah (mm)
Wareega wareega Bar laba jibbaaran Baarka la cadeeyay Sida ku xusan wax soo saarka.
.2 8 × 8 Nooca P
φ3 8 × 10 Nooca saddexagalka
.4 10 × 10 Faahfaahin gaar ah ayaa loo habeyn karaa midabka, noocyada kala duwan ee nooca wanaagsan.
. 7 12 × 12
. 16 30 × 10
φ 18 30 × 30
φ 22 40 × 10
.25 50 × 50
Qiimuhu waa tixraac kaliya, sicirka dhabta ahi wuxuu kuxiran yahay sheyga gaarka ah.
Sawirka foam silikoon silsilado ah
Waxyaabaha laxiriira xarkaha silikoonada xumbada
Fiiro gaar ah: 1. Xogta oo dhan si caadi ah ayaa loo isticmaalaa.
2. Midab gaar ah, dhexroor qaas ah, iwm ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo
baakadaha & rarka
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shirkadda iyo alaabteena, Guji astaanta kore si aad wax badan uga barato.
Jiangyin Jujie Rubber & Plastic Co., Ltd, oo la aasaasay 2007, waa shirkad hal abuur leh oo ku takhasustay soosaarka iyo horumarinta silikoon alaabta. Waxaan inta badan soo saarnaa tuubbooyin silikoon oo tayo sare leh, silsilado silsilad silsilad ah iyo walxaha isku xidha korantada, elektarooniga, laydhka, dawooyinka, cuntada, kiimikada, baabuurta, dhisida markabka, iyo warshadaha mashiinada.
1. Goormaan heli karaa oraahda?
Waxaan badiyaa sheegnaa 24 saac gudahood ka dib markaan helno baaritaankaaga. Haddii aad si deg deg ah u hesho qiimaha, fadlan na soo wac ama noo sheeg emaylkaaga si aan u tixgelinno mudnaanta baaritaankaaga.
2. Sideen ku heli karaa tijaabo si aan u hubiyo tayadaada?
Waxaan ku siin doonaa muunadeena jirta si aan u hubino tayadayada, laakiin qiimaha dhoofinta ayaa u baahan inaad adigu bixiso.
Ama xaqiijinta qiimaha ka dib, waxaad u baahan kartaa shaybaarro si loo hubiyo tayadeena, laakiin qiimaha muunadda ayaa loo baahan yahay inaad adigu bixiso .Ina qiimaha muunadda ayaa la soo celin karaa haddii tiradaada badan ee dalabkaagu ay gaaraan dalabkeenna.
3. Ka warran waqtiga hoggaanka ee wax soo saarka ballaaran?
Si daacadnimo ah, waxay kuxirantahay tirada amarka iyo alaabada aad ubaahantahay. Guud ahaan marka laga hadlayo, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad bilowdo baaritaanka wax ka badan hal bil ka hor taariikhda aad jeclaan lahayd inaad alaabooyinka hesho.
4. Waa maxay shuruudahaaga bixinta?
Waxaan aqbalnaa EXW, FOB, CIF, iwm. Waxaad dooran kartaa midka kuugu haboon ama ugu waxtarka badan adiga.
Hore: tubbada xumbada silicon ballaadhan ee ugu caansan
Xiga: 2020 tuubooyin isbuunyo silikoon cusub ah silikoon warshad tuubbo caag ah
2020 dabada gacmaha isbuunyada silikoon ah ee dab-damiska / hig ...
qaab xumbo qaab xumbo qaab daboolan ru ...
ningax warshad ningax silico unug furan ...
2020 tayo sare leh dabka u adkaysta rubon silicone ...
dhexroor weyn oo silicone tubbo xumbo tabinta sp ...
2020 silsilado silikoon cusub oo U-qaab ah / hufan ...
Lambarka 345, Wadada South Jingyang, Magaalada Qingyang, Jiangyin, Wuxi, Jiangsu, Shiinaha